RW Cumar oo ka codsaday baarlamanka ansixinta saddexda guddi Qaran – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ra’iisal wasaaraha xukuumada federaalka ah ee Soomaaliya, Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa ka dalbaday baarlammaanka Soomaaliya inuu dhakhso u ansixiyo guddiyada qaran ee ay xukuumaddu meel-marisay dhawaan.
Golaha wasiirrada ee Soomaaliya ayaa Khamiistii tagtay meelmariyay guddiyada garsoorka, doorashooyinka iyo xudduudaha ee Soomaaliya.
Ra’iisal wasaare Sharma’arke ayaa sheegay in ansixinta saddexda guddi ay saldhig u tahay in la gaaro hiigsiga Soomaaliya ee sannadka 2016-ka.
Sharma’arke ayaa dhinaca kale tilmaamay inay xukuumaddu abuurayso ciidammo gaar u tababarn oo beegsan doona Al-Shabaab, kuwaas oo dhawaan dhamaysan doona tababar u socda.
Ra’iisal wasaaraha ayaa hadalkan ka jeediyay kulan uu baarlammaanku ku yeeshay Muqdisho oo uu xildhibaannada ugu faah-faahiyay qorshe-hawleedka xukuumadda
Madaxweyne Xasan oo guusha ugu hambalyeeyey R/wasaaraha UK, David Cameron